Prof. Daw Khin Hla Hla – Healthy Life Journal
Prof. Daw Khin Hla Hla
ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်လှလှ (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့် လည်ပင်းရောဂါ ပညာဌာန၊ ဆေးတက္ကသိုလ်-၁)၊ ရန်ကုန်
Posts By Prof. Daw Khin Hla Hla
ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်လှလှ (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်းရောဂါပညာဌာန၊ ဆေးတက္ကသိုလ်-၁၊ ရန်ကုန်) ‘အသက်ကြီးလို့ နားလေးတဲ့အခါ တရားမနာနိုင်ရင် တစ်ပန်းရှုံးပါတယ်။ တရားအားထုတ်တာ ငယ်ငယ်ကတည်းက လုပ်ရမယ်ဆိုတာနားလည်ပေမယ့် ဘာအရေး၊ ညာအရေးတွေနဲ့ ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ ကျွန်မတို့တစ်တွေဟာ တရားနာမယ်လည်းကြံရော နားက မကြားတော့ဘူးလေ။ နားကြားကိရိယာနဲ့...
နားပြည်ယိုတာလား . . .
ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်လှလှ (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့် လည်ပင်းရောဂါပညာဌာန၊ ဆေးတက္ကသိုလ်-၁၊ ရန်ကုန်) မေး. မွေးရာပါ နားပြည်ယိုဖြစ်နေပါတယ်။ အခုအရမ်းယားပြီး အရည်တွေထွက်နေပါတယ်။ အသက်၄၂ နှစ်ပါ။ နားရဲ့အပေါ်ပေါက်လေး နှစ်ဖက်လုံးဖြစ်နေပါတယ်။ Wint Wah (FB) ဒီစာဖတ်သူရဲ့အဖြေကို ပြောရရင်...
ထိပ်ကပ်နာအပါအ၀င် နှာခေါင်းရောဂါများကို မှန်ပြောင်းသုံးပြီး ခွဲစိတ်ခြင်း
ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်လှလှ (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်းရောဂါပညာဌာန၊ ဆေးတက္ကသိုလ်-၁၊ ရန်ကုန်) ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ခေါက်က ထိပ်ကပ်နာအကြောင်း ရေးခဲ့ပါတယ်။ မဖတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ထပ်ရေးရရင် နှာခေါင်းဘေးက လေအိတ်တွေ ရောင်တာကို ထိပ်ကပ်နာလို့ ပြောတာပါ။ အဓိကအားဖြင့် နှာခေါင်းရောဂါ တွေဖြစ်ရာက ထိပ်ကပ်နာ...
ထိပ်ကပ်နာ (Rhino Sinusitis)
ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်လှလှ (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့် လည်ပင်းရောဂါပညာဌာန၊ ဆေးတက္ကသိုလ်-၁၊ ရန်ကုန်) ထိပ်ကပ်နာရောဂါဟာအဖြစ်များတဲ့ နှာခေါင်းရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်လွယ်ပြောရရင် နှာခေါင်းဘေးမှာ လေအိတ်အစုံ ၄စုံရှိပါတယ်။ အဲဒီလေအိတ်လေးတွေရောင်တဲ့ ရောဂါပါ။ လေအိတ် ၄စုံအကြောင်း ဗဟုသုတရအောင် ပြောပြချင်ပါတယ်။ ပါးရိုးမှာရှိတဲ့ လေအိတ်ကို...
ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်လှလှ (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်းရောဂါပညာဌာန၊ ဆေးတက္ကသိုလ်-၁၊ ရန်ကုန်) ဒီနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆိုတော့ ကျွန်မတို့ယူနစ်ရဲ့ ပြင်ပလူနာကြည့်တဲ့နေ့။ ကျွန်မတို့ဆေးရုံမှာ ယူနစ် ၅ ခုရှိတာမို့ တနင်္လာနေ့က သောကြာနေ့အထိ ကိုယ့်ရက်နဲ့ကိုယ် ပြင်ပလူနာကြည့်တဲ့ ရက်၊ ခွဲစိတ်တဲ့ရက်၊ လူနာဟောင်းစမ်းသပ်တဲ့ရက်၊...
စောစောပြ၊ စောစောတွေ့၊ စောစောကု
ပါမောက္ခဒေါ်ခင်လှလှ (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ကျွန်မတို့လူသားတွေဟာ အသက်ရှည်၊ ကျန်းမာချင်ကြတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။ ဒီလိုသာဖြစ်ချင်တာ၊ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ရမှာကိုတော့ မေ့နေတတ်ကြတယ်။ ရောဂါဆိုတာကလည်း နုတုံးကုကောင်းတယ်လေ။ စောစောကုရင် အပ်နဲ့ထွင်းရမယ့်ကိစ္စကို နောက်ကျမှရောက်ရင် အပ်နဲ့ထွင်းလို့မရတော့ဘဲ ပုဆိန်နဲ့ပေါက်ရတဲ့အဖြစ် ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် ကင်ဆာလိုရောဂါမျိုးဆိုရင်...
ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်လှလှ (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့် လည်ပင်းရောဂါပညာဌာန၊ ဆေးတက္ကသိုလ်-၁၊ ရန်ကုန်) ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆူညံသံတွေ အများကြီးပါပဲ။ ပြောပြရင်တောင် တော်ရုံနဲ့ ကုန်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီဆူညံသံတွေက လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ လေယာဉ်ပျံဆူညံသံနဲ့ သွေးတိုးရောဂါ ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့အကြောင်း ဆွီဒင်နိုင်ငံ၊...
ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်လှလှ (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်းရောဂါပညာဌာန၊ ဆေးတက္ကသိုလ်-၁၊ ရန်ကုန်) နားအကြားအာရုံ ချို့တဲ့တာက ကလေးမှာရော၊ လူကြီးမှာပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သောတအာရုံကိုခံစားနိုင်ဖို့ အပြင်နား၊ အလယ်နား၊ အတွင်းနားအားလုံး ကောင်းရမယ့်အပြင် ဦးနှောက်က အကြားအာရုံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့နေရာရောက်အောင် သွားရတဲ့လမ်း ကြောင်းတစ်လျှောက်လည်း...
ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်လှလှ (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်းရောဂါပညာဌာန၊ ဆေးတက္ကသိုလ်-၁၊ ရန်ကုန်) အရင်အပတ်က လည်ပင်းကြီးတဲ့ အကြောင်းရေးပြီး ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာအ ကြောင်းရေးပါမယ်။ ခန္ဓာကိုယ်နေရာတိုင်းလိုလို ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တာမို့ သိုင်းရွိုက်မှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်များဆုံး သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာက Papillary Carcinoma ဖြစ်ပြီး...